Ịhapụ Ya: Otú Buddha Na-akụziri Anyị Ka Anyị Kwụsị Nkwụsị
Okpukpe na nke ime mmụọ Origin & Development
Otú okpukpe Buddha na-akụziri anyị ka anyị kwụsị ịkwụsị
Kedu ụdị ndụ anyị na-eme ka anyị ghara ịnwụ banyere ihe ndị anyị na-apụghị ịgbanwe? Ma ọ bụ ịcha , nchegbu , ịkwa ụta, na-egbuke egbuke ma ọ bụ na- ezere mgbe ụfọdụ? Kedu ka obi ga-esi dị anyị ụtọ ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ịmụta ịhapụ ? Omume Buddha ọ na enyere anyị aka ịmụta ịhapụ?
Nke a bụ ihe atụ nke ịhapụ: E nwere akụkọ a ma ama banyere ndị mọnk Buddha abụọ na-eme njem na-achọ ịgafe ọsọ ọsọ na-adịghị emetụta. Otu nwa agbọghọ mara mma guzoro n'èzí dị nso, ọ dịkwa mkpa ka ọ gafee, ma ụjọ tụrụ ya, ọ rịọrọ maka enyemaka.
Ndị mọnk abụọ ahụ ekwela nkwa na ha agatụghị emetụ nwanyị aka - ha ga-abụrịrị ndị mọnk Theravada - otu onye mọnk kwụsịrị. Ma onye nke ọzọ choro ya ma buru ya gafee osimiri ahụ, mee ka ọ dị nwayọọ na n'akụkụ nke ọzọ.
Ndị mọnk abụọ ahụ nọgidere na-eme njem ha ruo oge ụfọdụ. Ekem owo ama ọsọn̄ọ ete, "I ama osio un̄wọn̄ọ ke mîkemeke nditịn̄ n̄wan ke n̄wan!
Onye nke ọzọ wee sị, "Nwanna, ana m edo ya ala ma ọ dịkarịa ala otu elekere elekere gara aga, gịnị mere i ji na-ebu ya?"
Ịhapụ Gaa Ọ Dị Mfe
Ọ bụrụ na m nwere ike ịgwa gị na ọ dị ụzọ atọ ị ga-esi edozi usoro ị na-agbagharị, ma ọ dịghị. Enwere m ike ịgwa gị na ụzọ Buddhist ga- eme ka ọ dịrị gị mfe karị, mana nke a na-ewe ọtụtụ n'ime anyị oge na mgbalị.
Ka anyị jiri ụfọdụ nyocha. Ihe anyị na-ekwu banyere ebe a bụ njikọ . "Njikọ" na echiche Buddha abụghị banyere ịmekọ ịhụnanya na ọbụbụenyi.
(Biko mee ka o doo anya na ọ dịghị ihe dị njọ n'inwe agbụ nke ịhụnanya na ọbụbụenyi.) Ndị Buddha na-ejikarị "ihe mgbakwunye " mee ihe n'echiche nke "ịrapara."
Mgbọrọgwụ nke mgbakwunye bụ ụgha kwere na onye dị iche. Nke a bụ ozizi siri ike nke Buddha, m ghọtara, mana ọ bụ isi okpukpe Buddha. Ụzọ Buddhist bụ usoro nke ịghọta ihe dị mkpa nke onwe ya .
Iji kwuo na onwe gị bụ "emeghị eme" abụghị otu ihe na-ekwu na ị dịghị adị. Ị dị, ma ọ bụghị n'ụzọ i chere na ị na-eme. Buddha kụziri na ihe kacha akpata nhụsianya anyị, nke enweghị afọ ojuju na ndụ, bụ na anyị amaghị onye anyị bụ. Anyị na-eche "M" bụ ihe dị n'ime akpụkpọ ahụ anyị, gịnịkwa ka e nwere "ihe ọ bụla ọzọ." Ma, nke a, Buddha kwuru, bụ ihe egwu dị egwu nke na-eme ka anyị jidere samsara . Na mgbe ahụ, anyị na-arapagidesi ike na nke a nakwa na n'ihi obi erughị ala anyị na enweghị obi ụtọ.
Inwe ekele zuru oke na ihe na-enweghị isi nke onye ahụ dị iche iche, onye a kpaara ókè bụ otu nkọwa nke nghọta . Ịmata ihe ọmụma na-abụkarị ihe omume izu ụka maka ọtụtụ n'ime anyị. Mana ozi ọma ahụ bụ na ọ bụrụgodị na ị ka enweghị nghọta zuru oke - nke bụ eziokwu banyere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ anyị nile - omume Buddha ka nwere ike inyere gị aka nke ukwuu site n'ịhapụ ịhapụ.
Iche echiche Na-abịa Home na Onwe Gị
Na Buddha, inwe uche abụghị naanị ntụgharị uche . Ọ bụ nkwupụta dum na-uche nke ugbu a.
Onye nkụzi Buddha bụ Thich Nhat Hanh kwuru, sị, "Ekwuru m na uche dịka omume nke ịnọ zuru oke na ndụ, ahụ na uche dị n'otu. Echiche bụ ike nke na-enyere anyị aka ịma ihe na-eme ugbu a. "
Gịnị mere nke a ji dị mkpa? Ọ dị mkpa n'ihi na iche echiche bụ ihe na- abụghị nrịgharị, ikpo ọkụ, nchegbu, ịkwa ụta, ịmị ọkụ na izere. Mgbe ị na-enwe nchegbu ma ọ bụ nrụgide, ị furu efu . Iche echiche na-abịa n'ụlọ gị onwe gị.
Ịmụta ịnọgide na-enwe uche maka ihe karịrị sekọnd ole na ole na oge bụ nkà dị mkpa maka Buddha. N'ọtụtụ ụlọ akwụkwọ Buddha, ịmụta nkà a na-amalite site n'ichegharị ume ọkụ. Nwee nchekasị maka ahụmahụ nke iku ume ka ihe ọ bụla daa. Mee nke a ruo obere oge kwa ụbọchị.
Onye nkụzi Soto Zen Shunryu Suzuki kwuru, sị, "Na ntụgharị uche [ Zen ] anyị na-ekwu na uche gị kwesịrị itinye uche na iku ume gị, ma ụzọ ị ga-eche na ị na-eku ume bụ ichefu ihe niile gbasara onwe gị na ịnọdụ ala na-eche gị na-eku ume. "
Akụkụ dị ukwuu nke uche bụ ịmụta ịghara ikpe ikpe, ma ọ bụ ndị ọzọ ma ọ bụ onwe gị. Na mbụ, a ga-elekwasị anya maka sekọnd ole na ole wee chọpụta, ntakịrị oge, na ị na-echegbu onwe gị gbasara akwụkwọ Visa. Nke a bụ ihe nkịtị. Na-eme nke a obere oge ọ bụla, n'ikpeazụ, ọ ga-adị mfe.
Ịdị nwayọọ, Obi ike, Amamihe
Ị nwere ike ịma ekpere Ekpere ahụ , bụ onye ọkà mmụta okpukpe bụ Reinhold Niebuhr dere. Ọ na-aga,
Chineke, nye m obi iru ala iji nakwere ihe m na-apụghị ịgbanwe,
Obi ike ịgbanwe ihe m nwere ike ime,
Na amamihe ịmara ihe dị iche.
Okpukpe Buddha enweghị nkuzi banyere Chineke nke monotheism, ma Chineke na-esote, nkà ihe ọmụma dị mkpa e gosipụtara n'ebe a bụ ihe dị ukwuu banyere ịhapụ ịhapụ.
Uche uche, n'etiti ihe ndi ozo, nyere gi aka imata na ihe obula o bu na i na-aru uzo, njo, nchegbu, na ihe ndi ozo, abughi ezigbo . Ma ọ bụ, ọ dịkarịa ala, ọ bụghị ezigbo oge nkeji a . Ọ bụ mmụọ na uche gị.
O nwere ike ịbụ na ihe na-enye gị nsogbu bụ nke dị adị n'oge gara aga. O nwekwara ike ịbụ na ihe nwere ike ime n'ọdịnihu na ị ga-ahụ ihe mgbu. Mana ọ bụrụ na ihe ndị a emeghị ebe a na ugbu a , ha abughi ezigbo ebe a na ugbu a . Ị na-eke ha. Ma mgbe i nwere ike ịghọta nke a, i nwere ike ikwe ka ha gaa.
N'ezie ma ọ bụrụ na e nwere ihe ị nwere ike ime iji mee ka ọnọdụ dị mma karị, ị ga-eme nke ahụ. Ma ọ bụrụ na ọ nweghị ihe ị nwere ike ime, echela na ọnọdụ ahụ. Breehe, bia n'ulo gi onwe gi.
Mkpụrụ nke Omume
Dika ike gi iji nọgide na-eche echiche na-akawanye ike, ị ga-achọpụta na ị nwere ike ịchọpụta na ị na-amalite ịkwanye na-enweghị isi n'ime ya.
Mgbe ahụ, i nwere ike ịsị "Ọ dị mma, ana m agagharị ọzọ." Naanị ịmara nke ọma ihe ị na-eche na-eme ka "ịghagharị" na-adịghị njọ.
Achọpụtala m na ịlaghachi azụ na ume ruo oge ole na ole na-eme ka nchekasị daa na (na-emekarị) daa. Ana m echegbu onwe ya, n'ihi na ọtụtụ n'ime anyị ikike a anaghị eme n'otu ntabi anya. Ị nwere ike ọ gaghị ahụ nnukwu ihe ozugbo, ma ọ bụrụ na ị jidesie ya aka, ọ na-enyere aka.
Enweghị ihe dịka ndụ enweghị nsogbu, ma inwe uche na ịmụta ịhapụ ihe na-eme ka nrụgide ghara iri ndụ gị.
Echiche Ziri Ezi-Ụzọ Buddha Ụzọ Ejiri asatọ
Kpoo iko gi
Gịnị Bụ Sutra na Buddha?
Hụ Onwe Gị Otú Chineke Si Ele Gị
Ihe Ndị Kraịst Na-egosi Ihe Omume
Atụmatụ Atụmatụ maka Ndị Mmụta Gụsịrị Akwụkwọ
Kedu ihe eji agba agba igwe?
Ihe omuma nke Nhat Hanh
Olee otu na mgbe iji mee ihe na French "Sur" ("On")
Mkpebi Ụlọikpe Kasị Elu na Nzuzo: Griswold v. Connecticut
Ọkọlọtọ Art: Ụdị Nne
Olee otú iji gosipụta onwe gị na Spanish
Top 25 Elvis Presley abụ nke oge niile
Ụdị Ista: Ọjọọ ma ọ bụ na ọ bụghị?
Mkpebi NYU na nke mbụ
14 Ụda olu
Ihe ndị na-eme ka okpueze mara mma
Cleopatra: Nwanyị nke Ike
Ihe omuma ihe omimi: Ihe omuma site na echiche
Nchegbu na Latin Syllables
George "Carpet" nke George Carlin
Ònye bụ onye Juu?
1973 British Open: Weiskopf Na-anọgide na-ajụkwa maka mmeri
The Great Siphonophore na Ihe ndị ọzọ na-emepụta Ihe Ndị E Kere Eke
Gịnị mere ejiji eji agbaju?
Ulo elu na ulo akwukwo di elu
N'ihe gbasara French Verb 'Laisser' ('hapụ')